Tynt နှင့်အတူ New ည့်သည်အသစ်များသို့ညှစ်ပါ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 16, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
လူတိုင်းသည် ၄ ​​င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုအပြည့်အ ၀ မြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနေကြသည် Martech Zone မတူပါဘူး သင်၏စာဖတ်သူအများစုသည်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုဖတ်ပြီးနောက်အခြားသူများထံပို့ရန်သို့မဟုတ် ၄ င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပို့စ်များတွင်ထည့်ရန်အတိုအထွာများကိုကူးယူပြီးကူးယူပါလိမ့်မည်။ Tynt ဆိုသည်မှာသင်အလွယ်တကူ embed လုပ်နိုင်သော service တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မိတ္တူကိုစစ်ဆေးပြီးသင်၏ URL ကိုကူးယူလိုက်သော content ထဲသို့ပေါင်းထည့်ပေးသည်။ အကြောင်းအရာများကိုအခြားနေရာများတွင် paste လုပ်သောအခါ…voilà…သင်၏အကြောင်းအရာသည်သင်၏ဆိုဒ်သို့ပြန်သွားရန် link တစ်ခုနှင့် paste လုပ်ထားသည်။
ဒီမှာ Tynt ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုကောင်းတစ်ခုပါ
Tynt သည် SEO နှင့် ပတ်သက်၍ ချိတ်ဆက်မှု၏စွမ်းအားကိုပြောဆိုသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကအကြောင်းအရာကိုကူးထည့်ပြီးထုတ်ဝေမယ်ဆိုရင်သင့်ဆိုဒ်ကိုပြန်ကောင်းတဲ့ link တစ်ခုရရှိထားပါတယ်။ ငါထင်တာကတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စာဖတ်သူတွေအတွက်အီးမေးလ်နဲ့အခြားနေရာတွေမှာနှိပ်ဖို့အတွက် link တစ်ခုပေးထားတာဆိုတဲ့အချက်ကိုငါတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်လက Tynt သည်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာကိုအကြိမ်ပေါင်း ၇၀၃ မိနစ်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကူးယူခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ၄ င်းသည်လာရောက်သည့် 703. ည့်သည်အရေအတွက် ၄ ဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်ဖောက်သည်များ၊ ဘရောက်ဇာ Toolbars နှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများအတွက်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်မှုအသစ် ၃၃၀ ကိုဖန်တီးထားသည်။ SEO ၏အကျိုးကျေးဇူး ... ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းအနည်းငယ်!) ။ ဤအချက်အလက်များသည်မလုံလောက်သေးပါ၊ သို့သော်ဤရိုးရှင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်များစွာလိုအပ်ပါသည်။ အနည်းဆုံးတော့ငါအကြောင်းအရာတွေကိုလူတွေကူးယူပြီး ၄ င်းတို့ရဲ့ကွန်ယက်ထဲကိုပို့လိုက်ရင်ငါအကြွေးရနေတာကိုး။
Tynt သည်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုကူးယူခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သတင်းပို့ခြင်းအချို့ကိုလည်းပေးသည် - သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မည်သည့်အကြောင်းအရာသည်လူကြိုက်များသည်ကိုစတင်စတင်လေ့လာခြင်းသည်၎င်းသည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်ပါ - ဤစာမူမှအကြောင်းအရာအချို့ကိုကူးယူပြီးအီးမေးလ်ထဲသို့ကူးယူပါ။
နောက်ဆုံးမှတ်စုတစ်ခု… Tynt ကိုငါဘယ်လိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာမမှတ်မိဘူး။ ဒါပေမယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်စာဖတ်သူတစ်ယောက်ကဒီအကြောင်းပြောပြီးငါဘယ်သူမေ့တယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ မင်းသာဖြစ်ခဲ့ရင်ငါ့ကိုအသိပေးပါ၊ ငါဒီ post ကိုအကြွေးအနည်းငယ်တင်မယ်။
Lazy Callers ရပ်တန့်!
Peter Van Dam ပွဲစား
မတ်လ 17, 2011 မှာ 6: 02 pm တွင်
link သည် youtube ဗီဒီယိုသို့သွားနိုင်ပါသလား။ ရှာဖွေမှုမှာဒီဗီဒီယိုကပိုမြင့်လာအောင်ကူညီပေးမလား။